Lean Management7type of waste by minsoenaing | Steem
Lean Management7type of waste by minsoenaing
myanmar · @minsoenaing · Apr 30 '19 (edited)
Lean Management7type of waste
# Lean Management 7type of waste
မနေ့ကတော့ Lean Management  နဲ့ပတ်သက်ပြီး waste အကြောင်းလောက်ပဲရေးတင်ခဲ့ပါ တယ်။ waste တောင်မှ ဝန်ထမ်းတွေလူမှန်နေရာမှန်မထားတဲ့အကြောင်းလေးပါ။ ဒီနေ့တော့ Lean Management  ရဲ့ Lean Principle (၇) ချက်ကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒါတွေကတော့...
- 1. Overproduction
- 2. Transportation
- 3. Motion
- 4. Wating
- 5. Processing
- 6. Inventory
- 7. Defects
## 1.Overproduction ပစ္စည်းပိုမိုထုတ်လုပ်ခြင်း
အဓ်ိပ္ပါယ်ကတော့ မလိုအပ်သေးပဲ ပစ္စည်းတွေပိုမိုထုတ်လုပ်ထားခြင်းဟာ Lean မဖြစ်ဖူးတဲ့ ဒါကြောင့် Lean Management  လုပ်မယ်ဆိုရင် မလိုအပ်သေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြိုတင်ပြီး ထုတ် လုပ်ထားခြင်းမပြုရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် ဒီလိုပစ္စည်းတွေကြိုတင်ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဟာ Cost ကိုပိုမိုစေပြီး ခေတ်အခါဟာအမြဲပြောင်းလဲနေပြီး Upgrade လုပ်ပေးနေရတဲ့အတွက် ကြိုတင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာ ခေတ်မမီတော့ဘူးဆိုရင် ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ပါရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါ တယ်။
## 2.Transportation သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း
ဒီနေ့ခေတ်မှာ Delivery ဟာ အလွန်လျင်မြန်ဖို့လိုနေပါပြီ၊ ပစ္စည်းပို့ဆောင်မှုကြာချိန်တွေဟာ ဖောက်သည်တွေကို စိတ်ပျက်စေပါတယ်။ မိမိလုပ်ငန်းမှာလည်း ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုပြီး မြောက်စေမှုအတွက် Lean မဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ပစ္စည်းများသယ်ယူပို့ဆောင်မှုလွယ်ကူ လျင်မြန်ဖို့ နေ့စဉ်နှင့်အမျှနည်းလမ်းများရှာဖွေပြီးဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သော ကုမ္ပဏီ တွေဆိုရင် မိမိဖောက်သည်များရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာစက်ရုံတွေသွားပြီးတည် ဆောက်ထား ကြတာဟာ Delivery Time ကိုလျော့ချဖိုရာအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
## 3. Motion လှုပ်ရှားမှု
လှုပ်ရှားမှုလို့အလွယ်ပြောလိုက်ပေမယ့် ပစ္စည်းတွေတင်တာချတာ၊ ကိုင်တွယ်တာတွေနဲ့ပတ်သက် ပြီးသူများနိုင်ငံတွေမှာတွေ လူတွေသုံးတာလျော့ချနေကြပါပြီ။ ဝန်ထမ်းတွေမလိုအပ်ပဲအများကြီး ခန့်ထားတဲ့အတွက် ကုန်ကျစရိတ်များပါတယ်။ များတော့ ပစ္စည်တွေပေါ်မှာဈေးထပ်တင်ရတဲ့ အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကုန်သူသူများထက်ဈေးပိုနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
## 4.Wating စောင့်ရခြင်း
သိတဲ့အတိုင်းစောင့်ရတာကို လူတိုင်းမနှစ်သက်ပါဘူး။ အချိန်တွေကအလကားမရပါဘူး။ စောင့် ဆိုင်းနေရခြင်းနဲ့ အချိ်န်တွေကုန်သွားတာလောက်နှမြောဖို့ကောင်းတာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့် ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု၊ သယ်ယူပို့ဆောင်မှုနဲ့ စာရွက်စတမ်းဖြည့်စွက်ခြင်း၊လက်မှတ်ထိုးခြင်းစတဲ့ အချိ်န် တွေကိုစောင်းဆိုင်နေရခြင်းကနေလျော့ချပစ်ဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်။
## 5.Processing အစီအစဉ်များစနစ်တကျမရှိခြင်း
ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တာ၊ ရောင်းချတာ၊သယ်ယူပို့ဆောင်တာ အစရှိသဖြင့် လုပ်ငန်းများအားလုံး အစီအစဉ်တွေစနစ်တကျမရှိဘူးဆိုရင်၊ လုပ်ငန်းမှာမထင်မှတ်တဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ပြဿနာတွေ၊ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုတွေဖြစ်စေမှာအမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးလိုလိုဟာ စနစ်တနကျအစီအစဉ်ရှိရှိ လုပ်သွားသွားနိုင်မယ့် စနစ်ရှိမှသာ Lean ကိုလျော့ချပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါ တယ်။
## 6.Inventory ပစ္စည်းသိုလှောင်ထားရှိခြင်း
ဒါကတော့ အရင်ခေတ်စနစ်တွေနဲ့သိသိသာသာကွာခြားသွားတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ခုခေတ် က ပစ္စည်းတွေကြိုတင်ထုတ်လုပ်သိုလှောင်ထားလို့မရတော့ပါဘူး။သိုလှောင်လိုက်တာနဲ့တစ်ပြိုင် နက်ဒီပစ္စည်းတွေအတွက် ငွေအရင်းအနှီးတွေမြုပ်ထားရခြင်း၊ ကြာရှည်ထားလို့ဈေးပိုမလာပဲဈေး ကျသွားနိုင်ခြင်း၊ ကွာလတီကျသွားနိုင်ခြင်း၊ စတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးတက်သွားနိုင်ပါတယ်။
## 7.Defects ချွတ်ယွင်းချက် အပြစ်အနာအဆာ
ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုမှာ ချွတ်ယွင်းချက် အပြစ်အနာအဆာရှိနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရောင်းချ ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာ ချွတ်ယွင်းချက် အပြစ်အနာအဆာရှိနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဒါက အောက်ခြေအထိ တိုက်ရိုက် ထိခိုက်စေတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ချွတ်ယွင်းချက် အပြစ်အနာအဆာရှိတဲ့ ကုန်ပစ္စည်း မျိုးကိုထုတ်လုပ်မိရင်တော့ ဒါဟာတကယ့်ကို ဆိုးဆိုးရွားရွား Lean ကိုထိခိုက်စေပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ မိမိတို့လုပ်ငန်းများမှာ ဖောင်းပွပြီးစရိတ်စကတွေကများ၊ အမြတ်တွေကမ ကျန်၊ လူပမ်းစိတ်မောဖြစ်နေပြီဆိုရင် Lean Management  (၇)ချက်ကိုသုံးစွဲပြီးအမြန်ဆုံးပြုပြင် ပေးနိုင်ကြပါစေဗျာ။
👍 luxbet, mshahabi, sbi5, suhlaing, staticinstance, nyinyiwin, sawlwin, rivalzzz, grandpawhale, uthantzin, lwanwai, louis88, waggy6, aggamun, zinminhtet, ratticus, aunggyi100, caesarsupaimin, cifer, zinzin, cnandofer, stalexmkl, steem-plus, halli-hallo, cryptojade, tombramycin, sljivanono, coolenglish, mrfantastik, antonigarciagil, aungzin, cryptoconnector, honeysara, lorax4096, bigdeej, kiraxoy, rupon89, sfj, xelos, watanabe, evanescence, moenya, wayla, minthike, laminmin, klone, tnay, ritikdokania23, olayinkasnr, alka.lin3, tareq76, thwinlay, emon366, ngawine, wunna, minmin008, myokhant, rhjibon17, winoo, minmin009, miftahulrizky, stellapentra, xonekaway, freshee, and 71 others
"Lean Management7type of waste"
antonigarciagil0B 895,712,522 100%
kiraxoy0B 638,807,617 0.5%
coolenglish0B 1,365,779,144 0.5%
shantanush0B 297,549,744 100%
acwood0B 356,534,753 0.5%
staticinstance0B 11,206,369,846 0.5%
caesarsupaimin0B 4,047,867,206 50%
ratticus0B 4,271,663,201 10%
nyinyiwin0B 9,396,936,340 50%
waizin0B 410,275,387 100%
bigdeej0B 652,542,788 0.5%
cifer0B 4,046,502,025 6%
larrydavid40B 472,841,069 0.5%
grandpawhale0B 8,242,450,272 0.5%
honeysara0B 833,531,032 50%
shadowbot0B 265,978,718 0.5%
lorax40960B 822,306,164 100%
luxbet0B 435,406,517,396 100%
steemlink0B 502,091,926 100%
lwanwai0B 6,408,657,397 80%
zinminhtet0B 4,539,311,068 75%
olayinkasnr0B 511,531,671 100%
steem-plus0B 2,034,578,502 0.14%
miftahulrizky0B 507,115,929 100%
embomb7010B 290,090,024 0.5%
heinzaw0B 226,265,014 100%
uthantzin0B 7,367,148,967 100%
aungzarlin0B 288,417,183 100%
suhlaing0B 11,242,288,934 100%
sawlwin0B 9,268,652,925 50%
zinzin0B 3,872,782,298 100%
cryptoconnector0B 860,477,017 0.5%
amicus0B 253,682,092 0.5%
aggamun0B 5,261,621,622 50%
mshahabi0B 202,111,651,534 49.74%
aunggyi1000B 4,239,230,395 100%
stalexmkl0B 3,145,412,189 100%
sljivanono0B 1,664,763,419 100%
aungzin0B 893,168,781 100%
kyawphyo0B 499,240,990 100%
jamunawng0B 243,218,086 50%
starlord280B 472,918,801 100%
baronbank0B 443,276,158 100%
hlaingwin0B 470,046,925 100%
jarradlevi0B 28,254,930 100%
cryptojade0B 1,882,118,323 100%
phyokyaw0B 246,292,431 100%
smiing110B 243,997,767 50%
storyangel0B 478,955,656 100%
rivalzzz0B 8,855,612,970 7%
louis880B 6,337,258,581 2%
winoo0B 507,584,479 100%
shwemon0B 287,961,107 100%
cheerylay0B 364,237,138 100%
glorialion0B 243,218,045 50%
golden-myanmar0B 243,220,009 50%
klone0B 512,387,649 100%
linmyatkoko0B 45,630,033 100%
thinzarnyinyi0B 243,218,045 50%
teaminfo0B 136,578,825 100%
naingwinko0B 415,366,834 100%
freshee0B 504,650,189 100%
xazid0B 265,947,729 100%
minthike0B 512,548,491 100%
waggy60B 5,375,002,605 98%
eduagf10B 401,611,518 100%
liongyi0B 243,806,851 50%
cryptos170B 29,037,148 100%
xonekaway0B 504,690,658 100%
stellapentra0B 504,880,180 100%
rupon890B 627,523,200 100%
tnay0B 512,274,942 100%
cnandofer0B 3,629,431,494 100%
sbi50B 54,564,402,872 28%
laminmin0B 512,485,090 100%
jpolitical960B 127,213,355 100%
kozwe30B 451,192,634 100%
kozwe40B 442,150,215 100%
wunna0B 508,633,762 100%
ngawine0B 509,514,763 100%
rhjibon170B 507,859,580 100%
alibaaaaaa0B 458,563,800 100%
az888220B 437,028,638 100%
glanter220B 148,131,746 100%
ntamntam0B 148,330,846 100%
calicabre0B 148,133,351 100%
nnko0B 504,623,522 100%
wayla0B 512,581,459 100%
moenya0B 513,786,029 100%
tartay0B 504,325,992 100%
taylae0B 503,565,504 100%
mrfantastik0B 1,137,315,130 100%
minmin0080B 508,403,698 100%
zwe10B 502,634,331 100%
myokhant0B 507,968,887 100%
htoolay0B 502,680,110 100%
thwinlay0B 510,858,109 100%
tareq760B 511,047,277 100%
minmin0090B 507,329,650 100%
thedoubleace1230B 361,304,141 100%
sasansam0B 243,220,049 50%
annbell0B 32,979,048 100%
ryanma07230B 504,594,740 100%
plo0B 244,017,235 50%
desg0B 244,019,264 50%
nrlio0B 244,017,235 50%
pcwor0B 244,017,235 50%
soulkeeper0B 244,017,235 50%
joot0B 242,638,493 50%
monst0B 244,017,235 50%
snowred0B 244,017,235 50%
phantomassassine0B 244,017,235 50%
jacklin190B 244,017,216 50%
hoverbooker0B 244,017,195 50%
naruhokage0B 244,017,235 50%
hanobooy0B 244,017,195 50%
emmaeliza0B 85,368,621 100%
ateeqbj0B 142,411,197 100%
ritikdokania230B 512,074,806 100%
alka.lin30B 511,394,032 100%
emon3660B 509,857,371 100%
gaurav99710B 451,966,206 100%
stocksfetcher0B 189,185,875 100%
nmahatele0B 503,744,328 100%
evanescence0B 547,407,983 100%
tombramycin0B 1,762,593,955 100%
sfj0B 548,649,163 100%
xelos0B 548,576,322 100%
halli-hallo0B 1,982,130,098 100%
watanabe0B 547,525,389 100%
savetheday0B 459,695,761 100%
@upvotebank · Apr 30 '19
@steem-plus · May 1 '19